Waddooyinka ugu Muhiimsan Magaalada Muqdisho oo Maanta xiran, Ogow Sababta? – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 18th February 2019 016
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa Maanta waxa ay xireen wadooyin ka mid ah kuwa muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho,iyaga oou diidaya inay isticmaalaan Gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay.
Waddooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ah Wadada,Wadnaha,30-ka iyo qeybo ka mid ah Jidka Warshadaha ee Magalada Muqdisho,waxaana warar kala duwan ay kasoo baxayaan sababaha looxiray Wadooyinkaas.
Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in Madax ka tirsan dowladda ay ka qeyb galayaan dhagax-dhig lagu sameynayo Wadooyinka isku-xira Magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Afgooye oo dib u dhis lagu sameynayo kuwaas oo dhismahooda ay horay u balan qaaday dowladda Qatar.
Ciidamada ayaa u diidaya inay Gaadiidka isticmaalaan wadooyinka aan soo sheegnay,iyada oo la arkayay in dadka qaarkood ee u socda Shaqooyinkooda gaarka ah iyo kuwa waxbarashada ay lugeynayaan maadaama wax gaadiid ah uusan Shaqeyneyn.
Todobaadyadii la soodhaafay ayaa Bulshada Magalada Muqdisho waxa ay ka nasteen xirnaanshaha wadooyinka qaar ee Magalada Muqdisho,kuwaas oo la xiro xilliyada ay madax dalka imaaneyso ama munaasabadaha.
DAAWO:Ilhaan Omar oo lagu helay fadeexad aad u weyn oo laga cabsi qabo in kursigeeda kuweyso
Xil ka qaadis lagu sameeyay taliyeyaasha 7 saldhig oo caasimadda ku yaala
Qaramada Midoobay oo ka dhawaajisay in kumannaan Somali ah ay la kulmi karaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah